Iqela leenkwenkwezi zeCorona Borealis - Khetha Uphawu
Iqela leenkwenkwezi zeCorona Borealis
Elinjani ixesha elinomdla lokuxoxa ngemicimbi yesithsaba, ubunkokeli, isikhundla, amadoda abalaseleyo, umfanekiso weSiqu kunye nazo zonke ezo zinto zivela kubukroti bethu kunye ne-ego yethu. Ngokusivalela ngaphakathi i-coronavirus, isibonisa ukuba iindlela ezintsha ziyafuneka ukuze simelane nenyani kwaye sizibonakalise kwihlabathi, kufuneka sicinge malunga nomfuziselo weli qela leenkwenkwezi kunye nokuba inokuba yintoni imiyalezo yalo.
Iinkwenkwezi kwiSangqa seZodiacal
ICorona Borealis okanye iNorthern Crown liqela leenkwenkwezi esetwe kwiatmosfera esemantla, egubungela uninzi I-Scorpio , ukuqala ngesidanga sayo sesi-3. Ekuqaleni kuka-2020 Mars yachukumisa isiphelo seli kroza, ibeka isandi esinamandla kumgca wokugqibela wawo onke amabali aqhagamshelweyo. Kukho iinkwenkwezi ezisixhenxe ezijongene nokwenza imilo yazo eyahlukileyo yesithsaba kwaye ezimbini eziqaqambileyo zibonwa kwi-9th kunye ne-12th degree yeScorpio. Ixesha liya kubonisa ukuba ubhubhani uphela ngandlela thile unika imikhondo eqaqambileyo kwaye uchaphazela kakhulu abantu abanamanqaku obuqu, ii-engile, Inyanga okanye iiplanethi ezikhawulezayo kwezo zidanga okanye kwimiba echanekileyo yeengongoma zobuqu kunye nabo.
Kulo nqaku, kunomdla ukujonga i-horoscope yoNyaka oMtsha e-Wuhan, e-China, apho iNyanga yafunyanwa kwi-12th degree of IiPisces , ngokwe-trine ngqo kunye ne-Alphecca, eyona nkwenkwezi iqaqambileyo kwikroza, ngelixa i Ilanga yenza i-sextile kunye neyesibini-eqaqambileyo, i-Nusakan. Igama lenkwenkwezi yalo yealpha, iAlphecca, ligama elathi laqalwa kulo lonke iqela leenkwenkwezi ngama-Arabhu kwaye lithetha ukwahlulwa njengesalathiso kumtya wamatye anqabileyo ahlukileyo kwenye. Lo mfuziselo kufanele ukuba uhlalutywe ngakumbi njengoko sisohlulwa ngokwasemzimbeni omnye komnye ngubhubhane njengomtya wamatye anqabileyo, kanye njengoko sigquma ubuso bethu ngokungathi sinxibelelana neenxalenye ezithile zezithethe zama-Arabhu.
Intsomi yeCorona Borealis ngokuyintloko intsomi ka-Ariadne , umfazi owancama ukunyaniseka kuyise ngenxa yothando, ukuze aphelise impindezelo neendlela eziyingozi zolawulo lwakhe. UKumkani uMinos waseKrete, uyise ka-Ariadne, wafumanisa ukuba imbuyekezo efanelekileyo yokubulawa konyana wakhe ngababulali abangaziwayo yayikukuba isixeko saseAthene sithumele amakhwenkwe amancinane asixhenxe kunye namantombazana aselula asixhenxe rhoqo kwiminyaka elithoba ukuze ondle i minotaur kwindawo eyakhiwe ngocoselelo. UTheusus, wayethetha ukuba ligorha eliphambili lebali, wavolontiya ukuba ahambe njengomnye wabaselula xa kwakufika ixesha lomjikelo wesithathu wokubingelela, ngenjongo yokumisa ukoyikeka kunye nokoyisa i-monster. Ekufikeni kwakhe eKrete, u-Ariadne wamthanda waza wagcina ubomi bakhe kwi-labyrinth eyakhelwe abo bangena ukuba bangaze babuye, wamnika ibhola lentambo. Wamxelela ukuba abophelele incam enye yentambo kwisango le-labyrinth ukuze asoloko elandela umva aze aphume. Esebenzisa ikrele lakhe elifihliweyo (okanye ngezinye iinguqulelo ikrele lomlingo elifunyenwe ku-Ariadne), wabulala i-minotaur kwaye wagqiba iminyaka yoloyiko kunye noloyiko olulawulwa yimpindezelo kayise. Le nxalenye yentsomi ngumfanekiso ocacileyo kaMars ofikelela ekuphakanyisweni kwawo Capricorn , ngenyathelo lokuqala lidityaniswa kwindawo ekuyiwa kuyo ngomgca osengqiqweni osinika ulwazi olufunekayo ukuze sibuyele kwihlabathi labaphilayo xa siye sajamelana ngenkalipho needemon zethu zangaphakathi ezibulalayo ( ISaturn ).
Ngenxa yezenzo zakhe zothando noncedo lwakhe, uAriadne wayeza kuba ngumfazi wakhe, kodwa endaweni yoko wamshiya esiqithini waza wahamba ngesikhephe ngoxa wayelele. Kukho ukutolikwa kunye nezizathu ezininzi zokulahlwa, enye yazo kukoyika uDionysus owayefuna u-Ariadne, kwaye omnye uTheus wabona umfazi owayemthanda ngakumbi kwaye wagqiba ekubeni ahambe naye. Nokuba yeyiphi na imeko, uthando lomzimba, lobuntu luthatyathwe kuye kwaye wathathwa ngokungakhathali, wasetyenziswa, kwaye ngendlela yokubambisa, wakhanyelwa kwaye washiywa, ukwenza unxibelelwano olunokwenzeka emva koko - noThixo kunye no. Neptune . Kulapho anikwa khona isithsaba esivela ku-Aphrodite njengesipho somtshato wakhe noDionysus, kwaye isithsaba sifakwe kwiinkwenkwezi ukubonisa uthando lwabo olungunaphakade (lobuThixo) oluphilisa onke amanxeba okusebenzisana kwabantu okusisiseko, abangenambulelo kunye nethuku, ukudibana komzimba.
Ukongeza kuloo nto, u-Leusus ugqiba ukutshata nodadewabo, kodwa akaze afumane ulonwabo kubudlelwane bakhe kunye nothando lobomi, ngelixa ethweswe isithsaba kwaye ezukiswa ngoothixo, njengoko wayefanele kwasekuqaleni.
Iingcaciso kunye nentsingiselo
Eli libali lamandla anikwe kwaye amkelwe, ahlanganiswe kwimijikelo yekarma ekufuneka ibuyiselwe, njengoko amabali ebuyela ekuqaleni kwawo, impindezelo iyathathwa, uthando lubuyiselwa, izithunzi zoyisiwe kwaye imilo yethu yangaphakathi yobugorha inokusenza singakhathali. abanye. Ikwalibali elimalunga netyala kunye nokulahlwa, izithembiso ezazingahlonelwa, uloyiko, iindlela ezitshabalalisayo zoluntu, namadini angasafunekiyo ukwenziwa xa uthando lusinika izixhobo zokujongana nezithunzi zethu kwaye siphume kubunzima bethu. . Ubukhulu becala, eli libali elimalunga nombulelo kunye nothando olungagungqiyo, apho isandla sokunika umntu onothando sinamandla okukhusela, ukonga kunye nokwenza indlela ngeyona miba inzima neyingozi. Nangona ulindelo luka-Ariadne aluzange lufezekiswe, kwaye ubonakala engenanto imbuyekezo kwindoda ayithandayo, uthweswe isithsaba ngoothixo kwaye uvuzwe ngamagunya aphezulu njengalowo ufanelwe ukuvuya. Ukhethe ukulandela intliziyo yakhe kwaye abe nokholo olupheleleyo kulowo wayemthanda, kwaye oku kwamenza isithsaba xa olu kholo lwandiswa ukuze ludibane nobuNgcwele.
Gcina ukhumbule ukuba isenzo sobugorha sobudoda, apho u-Leusus woyisa irhamncwa eliqwenga ulutsha, akukho nasiphi na isithembiso sesidima kunye nentlonipho ngokubhekiselele kwibhinqa. Ngaphandle kweemvakalelo kunye nezigqibo zakhe ngokuchasene nosapho lwakhe, ukufuna kwakhe ngekhe kwenzeke. Lukholo lwakhe kuye olumnika yonke into ayifunayo edabini, ukanti, wamthatha nje kancinci ukuba aqhubeke aze amshiye ngaphandle kokuvalelisa. Inokuba ligorha, kodwa nguye onxibe isithsaba, kwaye kulapho kanye izinto ziba nzima ukutolika ngokweemeko zethu zangoku.
UMjikelo kunye nobhubhane
Uqhagamshelo lwendyikityha yethu eqhubekayo neli qela leenkwenkwezi kunye nentsomi yomelele. Uhlobo lwentsholongwane enegama layo njengeflegi ebomvu phambi kwethu, kubonakala ngathi sisithunywa sokuthetha ngokungcatsha okungabonakaliyo, imiba efuna uthando phezu kwe-ego, kunye nobufazi phezu kobudoda ukuze uthando luphumelele. Uloyiso lwangempela olufanelwe isithsaba esiphezulu alukho kumlo kaTheseus kunye ne-minotaur (nangona kuyimfuneko kwaye iqhawe eliphambili), kodwa kwizenzo zothando zowesifazane onika indlela, ukuqonda, ngokholo kunye nokuzinikela komnye. Ukungazicingeli kuyavuzwa kwaye kuyaphumelela kwaye akukho kuleqa iwonga okanye isikhundla kuya kuba neziqhamo ukuba akukho lunxibelelwano nabanye abantu kunye noxanduva kwabo basithandayo kwaye banikezela ngokunyaniseka kwabo ukuze basigcine siqhubeka. Litikiti lethu lokuphuma kwiimaze ezididayo kunye nezilo zethu zangaphakathi.
Ukoyiswa kukaMinotaur emva kweminyaka engama-27 yemikhwa yakhe emibi yokutya sisiqwengana esifanelekileyo sebali apho ngamnye wethu unomsebenzi ekufuneka awutyhile. Sijongene necala lethu lethuku, elichasene nomntwana wethu wangaphakathi, olambileyo, osoyika, kwaye ontsokothileyo. Yingcambu yoloyiko olukhoyo oluza ngokuziphindezela kunye noloyiko lwethu lokulahlekelwa. Ikwangumqondiso wokuba izithunzi zethu ziye zakhululwa, zaqatshelwa, kwaye zoyiswa ngezipho zothando. Kufuneka sigcine izithembiso zethu, sibone ukupha okungenamiqathango kunye nexabiso ekufuneka silihlawule ukuze sonwabe.
Okubangela umdla kukuba, kanye kwiminyaka engama-27 eyadlulayo ngoAprili nangoMeyi, sasisandul’ ukufunyanwa sisifo seHantavirus pulmonary syndrome esathi sabulala abantu abathile eUnited States. Ngomhla wama-23 kuAprili kwangaloo nyaka, iWHO yabhengeza isifo sephepha njengengxakeko yehlabathi. Ukuhlonipha umjikelo, kwiminyaka eli-9 kamva ngoNovemba, ubhubhani we-SARS uqala eTshayina. Njengoko iminyaka elandelayo ye-9 idlula, i-2011 izisa eminye imicimbi yeNyanga (i-heart chakra) ukuba igxininise ngokukhukula okugqithisileyo eThailand, eCambodia, ePakistan, ePhilippines kunye nenyikima yaseJapan eyakhokelela ekufeni kwabantu abaninzi kunye nezilumkiso zetsunami kumazwe angama-50. Le yayiyeyona nyikima inamandla kweyakha yabhalwa eJapan yaye iye yesine ehlabathini lonke ukususela oko kwaqaliswayo ukugcinwa kweerekhodi.
Ngaphambi kwalo mjikelo uphela, ngowe-1984 asiyi kubona miqondiso inzulu neyomhlaba esasazwayo kwimiba efanayo. Oku kuzisa ukukhululeka njengoko kuthetha ukuba umjikelo uphelile kwaye uya koyiswa kwaye uhambe kakuhle. Kwelinye icala, sifanele sizibuze ukuba yintoni eye yabangela ingqumbo yoothixo, amagunya nootata bazo zonke iintlobo ukukhokelela kweli nqanaba lokungazinzi ngokwasemzimbeni nakwezoqoqosho. Wangcwatywa phi umsindo kwaye yeyiphi imeko efana nemfazwe okanye ebulalayo kwiminyaka yoo-1990 eyakhokelela kumjikelo obanzi kangaka wokuqukumbela ngoku, ngokubuya kweSaturn kulawulo lwayo lobulungisa ecaleni Pluto , umqokeleli wobomi? Ngubani ogcine iimfihlo kwaye ngubani owaphindezela ngelo xesha?
Impembelelo yomntu kunye noxanduva luka-Ariadne
Jonga iminyaka kwinqwelomoya yakho ngokunjalo, ngakumbi ukuba kukho unxibelelwano oluluqilima lwetshathi yakho yokuzalwa kweli kroza. Sonke sinikezela ngenxalenye yethu yomoya odibeneyo kwaye ungaqwalasela ubukho bomxholo ebomini bakho, kunye nesabelo sakho esifanelekileyo soxanduva olulodwa phakathi kokuhamba ngokudibeneyo. Ngokucacileyo lixesha lokuxolela, siguqukele kumsebenzi wokomoya endaweni yokuba nenqala okanye sinqumle abo bangazange basenze sono. Amatyala asenokungahlawulwa kwaye okwangoku, i-Universe iyazikhathalela kwaye ihlawulisa kwinqanaba eliphezulu. Ookumkani banokuba ngookumkani kodwa abayi konwaba ukuba baziphindezela okanye abanambulelo, kwaye sonke sicelwa umngeni ukufuna umbulelo kwabo bangazange bafune ukuma ecaleni kwethu ngokuchasene neentsapho zabo, imibutho yezentlalo kunye nenkqubo yabo kodwa basasithanda ngokwaneleyo. ukukhetha ukwenza njalo.
Kwelinye icala, eli libali lothando olunemeko ekufuneka lukhule ngaphandle kwemeko yalo yexhoba kwaye ufumane uxolo ekunxibelelaneni noThixo. Nokuba siyathanda okanye asithandi, u-Ariadne wayenesabelo sakhe soxanduva kwizinto ezilindelekileyo, ukuzimela, kunye nobudlelwane nendoda engamfanelanga kodwa isixhobo kuphela sokuphelisa izithunzi zosapho eziye zendele nzulu. Usenokuba wancama yonke into awayeyazi ukuze amncede, kodwa wamkhulula kwizenzo zobudemon zikayise waza wamkhokelela kuThixo. Ewe, umbulelo uhamba ngeendlela zombini, nangona sisenokungawuboni ekuqaleni, yaye ewe, ulonwabo lokwenyaniso lufumaneka kuphela ukuba sikholelwa kwizinto ezingabonakaliyo, ezingenakwenzeka, nakwinxalenye yokomoya yombindi wethu weemvakalelo owenzakeleyo.
Ngaphezulu kwayo yonke into, oku kubonakala ngathi lithuba lethu lokubona ixabiso elikhulu lezinto esizinikezela kwimbumba ngokuthi soyise iidemon zethu kwaye sibe nombulelo kumlo wethu wangaphakathi ngemizabalazo yawo, kanye njengamandla ethu obufazi ukuba aphume ngaphandle. iipatheni zomnombo wethu. Lithuba lokuba ungabi lixhoba kwaye ungabi nambulelo kuSiqu, sikhethe ukungalishiyi icala lethu elisengozini ngasemva kweli xesha. Hlangana nawe, njengoko unjalo umyalezo weCorona Borealis, kuba lonke uthando onalo aluxhomekeke kuye nawuphi na umntu ngaphandle kwakho. Ngena ngaphakathi, phefumla, kwaye uvumele iimvakalelo ukuba zinike amandla elukholweni, ngelixa ubulela ubudoda bakho ngamandla ayo asebenzayo okusika oko bekutshabalalisa okanye kungcoliswe ngumsindo ukuya kwinqanaba lokungabi nabulungisa.
Ngayo yonke into ethethiweyo, khumbula ukuba indoda yethu yangaphakathi ayizukuba ngumfazi kanye njengokuba umfazi wethu wangaphakathi engayi kuba yindoda. Ekuphela kwento esinokuyenza kukubanika intlonipho eyaneleyo efanayo kunye nombulelo ukuze basebenzisane kwinjongo ephezulu. U-Ariadne usenokuba wayekhokelwa luthando lwendoda engatshatanga, kodwa uye wakhokelwa ukuba aphelise amasikizi okungekho sikweni kunye nokuziphindezela endleleni yakhe kuThixo. Ngelixa silindele okuninzi kumabali ethu othando asemhlabeni kunye namaqabane ethu, anokuba zizixhobo kuphela ezikhokelela kunyango olukhulu kusapho lwethu kunye neendlela zehlabathi. Ulindelo oluvela kwabanye kufuneka luthotywe njengoko sonke singabantu kuphela, kodwa ulindelo ngokubanzi lufanele lube phezulu xa kuziwa kulonwabo oluza kwindlela yakho ukuba sizibophelele ekuthandeni nasekuncedeni abanye ngokungazingci, nokuba sinyanisekile kwabo benzakeleyo. ulahlekelwe endleleni.
Umhlaza Pisces Virgo Gemini Iponti